पछिल्लो २४ घण्टामा ६,६३६ जना संक्रमणमुक्त, ३,४७९ जनामा संक्रमण पुष्टि — Imandarmedia.com
पछिल्लो २४ घण्टामा ६,६३६ जना संक्रमणमुक्त, ३,४७९ जनामा संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३४७९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १०४७१ पीसीआर परीक्षणबाट ३०२४ र ३२६२ एन्टिजेन परीक्षणमा ४५५ जना गरी ३४७९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
यी बानीका कारण मानिसहरुलाई हृदयघात हुने,जानसक्छ अकालमा ज्यान, डब्ल्यूएचओले दियो यस्तो चेतावनी
आजकाल धेरैजसो मानिसहरुको दिनचर्याको धेरैजसो समय अफिसको कामकाजमा नै बित्ने गर्छ । यसैकारण मानिसहरु शारीरिक क्रियाकलाप र व्यायाममा ध्यान दिइरहेका छैनन् । यद्यपि, विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसकारे जुन आँकडा सार्वजनिक गरेको छ, त्यो निकै भयानक छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) र अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का अनुसार थुप्रै घण्टासम्म काम गरेका कारण स्ट्रोक र मुटुरोगका कारण सन् २०१६ मा ७४५,००० को मृत्यु भयो । यसमा सन् २००० पछि २९ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छ ।
डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एडनहोम गेब्रेयेससले भने, ‘कोभिड–१९ महामारीले थुप्रै मानिसहरुको काम गर्ने तरिकालाई निकै परिवर्तन गरेको छ । थुप्रै उद्योगमा ट्याली वर्किङ अर्थात् वर्क फ्रम होमलाई आदर्श मानिएको छ जसले धेरैजसो घर र कामबीचको सीमालाई धमिलो पारिदिन्छ ।
यसबाहेक थुप्रै व्यवसायलाई पैसा बचाउनका लागि वा काम बन्द गर्नका लागि बाध्य पारिएको छ र जो मानिसहरु काम गरिरहेका छन्, उनीहरु घण्टौंसम्म काम गरिरहन्छन् । कुनै पनि जागिर स्ट्रोक वा हृदय रोगको खतराभन्दा ठूलो होइन । स्वास्थ्यको देखभालका लागि सरकार, रोजगारी प्रदायक र कर्मचारीले मिलेर कामको घण्टाको सीमा निश्चित गर्नुपर्छ । ’
विश्व स्वास्थ्य संगठनमा पर्यावरण, वायु परिवर्तन र स्वास्थ्य विभागकी निर्देशक डा. मारिया निराले भनिन्, ‘प्रति हप्ता ५५ घण्टा वा सोभन्दा बढी काम गर्नु स्वास्थ्यका लागि एउटा ठूलो खतरा हो । यो समय हामी सबै सरकार र कर्मचारी यो तथ्यप्रति जागरुक हुन र लामो समयसम्म काम गर्दा अकालमा मृत्यु हुनसक्छ भनेर थाहा पाउन आवश्यक छ । ’